Dubbistoota keenyaa akkuma Jiildii keenya 8ffaa irrati waa’ee baayoo gaazii maal akka ta’e ibsuu yaaluun keenya beekamaa dha. Haaluma kanaan kanatti aansuun imnmoo akkaataa qophaa’iinsaa fi mala itti fayyadama baayoo gaasii jarreen sadan armaan gadii kana haa ilaallu: Isaanis aadde Caaltuu, aadde Tolashee fi aadde Alamiituu walii wajjin faayidaa isaa mariyachaa jiraachuu isaaniiti.
Bifuma wal fakkaatuun mee haasaa aadde Alamiituu kana haa ilaallu: Isaanis waa’ee jireenya isaanii akkana jedhu; Yeroo ammaa kana baay’een gammadeen jira; icciitiin gammachuu kootiis itti fayyadamtuu baayoo gaasii ta’uu kooti. Guyyaa baayoo gaasiitti fayyadamuu eegalee kaasee aarri nama jeequ hin jiru; ibiddaan gubachuunis hin jiru. Hunda Caalaa immoo waggoota oomiishaa lamaan darban keessatti lafa qonnaa xiqqoo irraa Oomiisha ani argadhe nyaata maatii kootiif naga’u irra darbee qarshii akkan argadhu na dandeessisee jira.
Aadde Caaltuun itti aansuun akkana jedhu dhuguma yeroo dhiyoo as jireenyi kee hedduu fooyya’aa ta’ee argeen jira. Dhoksaan isaas kana jechuu dhaa? Aadde Tolasheen waa’ee aadde Alamiituu kana baay’ee dinqifachuun oomiishni isheen argattu kan namoota biraa irra hedduu fooyya’aa fi fayya qabeettii ta’uun ishee icciitii kana jechaa dha jettee itti aansuun gaaffii gaafatte. Haata’u malee baayoo gaasii jechuun maal jechuu dhaa? Aadde Alamiituun akkan jettee akkuma beektan kana dura waan hedduutu nadhiphisa; akkasumas dhukkubsachaa turuun koo beekamaadha. Kunis aara ibiddaa fi qulqullina naannoo dhabiinsa akka ta’e barnoota leenjii nuuf keenname irraa ka’ee hubachuun warra baayoo gaasiitti fayyadamu bira deemuun barumsa argadheen jira. Egaan baayoo gaazii jechuun dhoqqee loonii, bobbaa mana ficaanii fi kosii mana keessaa kan salphaatti tortoruu danda’an walitti ukkaamsuun yoo danda’ame immoo dhoqqee loonii itti baay’isuun bishaan safarri walqixa ta’ee bulbulame guuboo ykn boolla qophaa’e keessatti naqame akka tortoru erga taasifamee booda yeroo muraasaaf qilleensa malee ukkaamamee yommuu turu, gaasiin achi keessatti uumame ba’u humni inni kennu ”baayoo gaasii” jedhama.
Gaazichi guubicha ykn boolla keessaa ujummoo dhaan gara manaatti fudhatamee ibsaa ta’uun akkasumas nyaata bilcheessuu dhaan dabalata xaa’oo uumamaa ta’uun tajaajila guddaa kenna. Mee kottaa gara manaa deemnee akka inni itti qophaa’u akkasumas hojjetu isinittan argisiisa.
Aadde Alamiituun akkana jechuun waa’ee baayoo gaasii kana akka walii galaatti yeroo ibsan, akkuma ilaaltan kana; faayidaan baayoo gaasii hedduu dha. Innis aara ibiddaa irraa biliisa nama godha, akkasumas mana fincaanii wajjin wal quunnamee waan jiruuf fayyaan keenya akka eegamu gochuu dabalataanis erga humna ibsaa fi wanta nyaata ittiin bilcheeffachuuf fayyadamnee booda Xaa’oo lafa keenya akka dabaluuf itti gargaaramna. Kunis guddina midhaanii karaa hundaatiifuu albuuda barbaachisoo ta’an hund dhiyeessuu dhaan hundeen biqiltootaa akka itti tolu gochuu dhaan guddina oomiishaaf akka dabaluuf ga’ee guddaa gumaacha.
Next Next post: Walii galan Alaa galan